Amar ka soo baxay Waare oo shaqada looga joojiyay Gaadiidleyda magaalada Jowhar – War La Helaa Talo La Helaa
Maamulka Gobalka Sh/dhexe ee HirShabelle ayaa tallaabo la yaab leh ka qaaday Baabuurta dadweynaha ee ka dhex shaqeeyo inta u dhaxeyso Jowhar iyo Muqdisho kadib markii ay Shalay diideyn inay qaadaan dadweyne badan oo la doonayey inay Garoonka
Diyaardaha kusoo dhaweeyaan Madaxweynaha HirShabelle Maxamed Cabdi Waare oo Shalay halkaas gaaray.
Maamulka Gobolka Shabeelada Dhexe ee hoos tago Hirshabelle ayaa ku dhawaaqay inay shaqo joojin ku sameeyeen gawaarida dadweynaha ee isaga goosha inta u dhaxeyso Jowhar iyo Muqdisho.
Sida wararka aan ku heleyno sababta ka dambeysay xayiraadaan ayaa lagu sheegay in qaar ka tirsan gaadiidleydaas ay shalay diideen in ay qaadaa ndad shacab ah oo Garoonka Diyaaradaha Jowhar kusoo dhaweeyey Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Hirshabelle.
Sababta ku kaliftay Gaadiidleyda inay diidaan qaadista dadweynahaas ayey ku sheegeyn cabsi ay Al-Sabaab ka qabaan haddii ay qaadaan dadka soo dhaweynayo madaxda Hirshabelle, maadaama arrintaas horey loo sheegay in looga digay.
Gaadiidleyda ayaa ku dooday in jidka ay ka shaqeeyaan ee isku xira Jowhar iyo Muqdisho ay ka buuxaan ciidamo ka tirsan AL-Shabaab kuwaas oo ku hanjabay inay gubi doonaan Baabuurtii la shaqeyso maamulka darawadana ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci ah.
Amarka gaadiidka Shaqada looga joojiyey ayaa waxaa lasoo sheegayaa inuu kasoo baxay Maamulka Gobolka Shabeelaha Dhexe oo si weyn uga carooday inay Gawaarida diidaan qaadista dadweynaha soo dhaweynayo Madaxweynaha Hirshabelle.
Gaaliidleyda ayaa codsaday in shaqadooda loo fasaxo isla markaasna go’aankaas uu yahay mid ay aad uga xumaadeen.
Kooxda Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeysay waxay aad ugu soo xoogeysteen jidka u dhaxeeyo Muqdisho iyo Jowhar, waxayna halkaas ka fuliyeen dhowr weerar sidoo kalana waxay jidkaas ku gubeen baabuur ay lahaayeen dad shacab ah.